Une zvaungada kutsvakurudza here kuti uwedzere zivo yako yeBhaibheri? Pane rugwaro kana kuti munhu, nzvimbo, kana chimwe chinhu chinotaurwa muBhaibheri chaunoda kuziva here? Kana kuti wakambofungawo here kana Shoko raMwari richigona kukubatsira pane zvinenge zvichikunetsa? Kana zvakadaro shanyira raibhurari yepaImba yoUmambo.
Mune zvinhu zvinobatsira pakutsvakurudza. Ungangodaro usina mabhuku ese anotsanangura Bhaibheri eZvapupu zvaJehovha anowanika mumutauro wako. Asi raibhurari iri paImba yoUmambo ine zvinyorwa zvakawanda zvichangobva kubudiswa. Inogonawo kunge iine shanduro dzakasiyana-siyana dzemaBhaibheri, duramazwi rakanaka, kana kuti mamwe mabhuku anobatsira pakutsvakurudza. Wakasununguka kushandisa raibhurari yacho misangano isati yatanga uye yapera. Kana muraibhurari macho muine kombiyuta, ingangodaro iine Watchtower Library. Iyi ipurogiramu yepakombiyuta ine zvinyorwa zvedu zvakawanda uye iri nyore kushandisa pakutsvaka nyaya, shoko kana kuti rugwaro.
Inobatsira vadzidzi vari paMusangano weUshumiri Uye Kurarama. Kana wakanyoresa pachikoro, ungakwanisa kushandisa zvakanaka raibhurari yepaImba yoUmambo paunenge uchigadzirira hurukuro dzako. Mutariri weMusangano weUshumiri Uye Kurarama ndiye anoona nezveraibhurari yacho. Ndiye anofanira kuona kana zvinyorwa zvitsva zvirimo uye kuti zvakarongedzwa zvakanaka. Iye kana kuti munhu anokudzidzisa Bhaibheri anogona kukuratidza mawaniro aungaita mashoko aunoda. Zvisinei, hapana mabhuku emuraibhurari anofanira kubudiswa muImba yoUmambo. Uye tinofanira kubata mabhuku acho nokungwarira uye hatifaniri kuanyora-nyora.
Bhaibheri rinoti kuti ‘tiwane zivo pamusoro paMwari,’ tinofanira kuva nechido chokuitsvaka “sepfuma yakavanzwa.” (Zvirevo 2:1-5) Raibhurari yepaImba yoUmambo inogona kukubatsira kutanga kutsvaka zivo yacho.
Zvinhu zvipi zvokushandisa pakutsvakurudza zvinowanikwa muraibhurari yepaImba yoUmambo?
Ndiani angakubatsira kuti ushandise raibhurari yacho zvakanaka?
Kana uchizoda kutanga kugadzira raibhurari yako, ona kuti mabhuku api anowanikwa pakaunda yemabhuku. Mudzidzisi wako weBhaibheri anogona kukuudza mabhuku aungafanira kutanga kutora.
Raibhurari yepaImba yoUmambo Inogona Kukubatsira Sei?